कहिल्लै हा'र नमानी आफ्नो भा'ग्य आफै बदल्ने यी राशि भएका व्यक्तिहरु जानिराखौ ! »
कहिल्लै हार नमानी आफ्नो भाग्य आफै बदल्ने यी राशि भएका व्यक्तिहरु जानिराखौ ! शा’स्त्रका अ’नुसार सबै गरी रा’शिहरू १२ वटा मात्र हुन्छ’न् । वि’श्वमा रहेका सम्पू’र्ण मा’निसहरूको रा’शि अनुसार उनीह’रूको भाग्य, क्षम’ता र व्य’वहार फरक फरक हुने गर्दछ । त्यसै’मा पनि को’हीको बौधि’क क्ष’मता धेरै हुन्छ भने कसै’को क’म पनि हुन्छ । ज्यो’तिष शास्त्र’का अनु’सार हरेक फर’क राशि’का व्यक्ति’मा व्य’वहार, भा’ग्य फर’क हुन्छ ।
केही यस्ता ५ राशि’हरू छन् जुन राशि भए’का मानिस जीव’नमा क’हिले हार मा’न्दैनन् । उ’निहरू आ’फ्नो जीवन बाट क’हिले पनि हार खा’दैनन् र आफ्नो लक्षको लागी कडा मि’हेनत गर्ने गर्दछन् । हेरौँ उ’क्त पाँच राशि तल
कर्कट: कर्कट राशि भएकाले आफ्नो कामको नतिजा खोज्ने गर्दछछन् । यस कारण उनीहरु कुनै पनि कामको जिम्मा लिन्छन् भने त्यसलाई पूरा गर्न कुनै कमि राख्दैनन्। सिंह: आफ्नो क्रोधित स्वभावको कारण यस राशिको व्यक्तिहरूलाई अग्नि तत्वसँग सम्बन्धित मानिन्छ। यी राशि भएका मानिसहरू महत्वाकांक्षी मात्र नभएर उनीहरुले शक्तिलाई पनि माया गर्छन्। उनीहरू केहि प्राप्त गर्न कडा मेहनत गर्छन्।
यो पनी हेर्नुहोस्ः यी ४ राशिका महिला विवाह पछि श्रीमानको घरमा राज गर्छन् । शास्त्रका अनुसार यी राशि भएका महिलाहरूले आफ्नो श्रीमानको खासै कुरा नसुन्ने आफ्नै मर्जी चलाउने, दाम, साम, दण्डभेदको समेत प्रयोग गर्ने गर्छन् । घर परिवारमा हुने हरेक प्रकारको निर्णयमा पनि आफ्नै राज गर्ने अरूको कुरा नसुन्ने र देखावटी गर्न मन पार्ने भएका कारण यस राशि भएका महिलाहरू अरूलाई देखाउनको लागि भएता पनि काम भने गर्ने गर्दछन् । नेतृत्व भूमिका निभाउने खुबी हुने गर्दछ भने परिवारमा हुने हरेक कार्यमा समेत अगाडी हुने भएका कारण परिवारमा यस राशि भएका बुहारीहरूले राज गर्ने गर्छन् ।
यी ३ राशि भएका युवती, जसले पुरुषलाई पहिलो भेटमै फिदा बनाउँछन् । ज्योतिष शास्त्रका अनुसार १२ राशि हुने गर्दछन् । यी १२ राशि अनुसार व्यक्तिको स्वभाव, चरित्र पनि फरक हुने गर्दछ । राशि अनुसार भविष्य, स्वभाव, चरित्रलाई सजिलै नियाल्न सक्ने ज्योतिष शास्त्रले बताएको छ । यस्ता कतिपय राशि पनि छन् जसले अन्य व्यक्तिहरूलाई सजिलै आकर्षण गर्न सक्ने शक्ति दिएको हुन्छ । आज हामी तपाइहरूलाई ती राशिको बारेमा बताउनेछौ जुन राशि भएका युवती देखेर पुरुषहरू फिदा हुने गर्दछन् । हेरौँ ती राशिहरू
यि ३ राशी हुने छोरी बुहारी हुन्छन् लक्ष्मी समान, घरलाई बनाउँछन् स्वर्ग फरक फरक राशि अनुसार मानिसमा हुने भाग्य र व्यवहार फरक हुने गर्दछ । विवाहको सम्बन्धमा पनि राशि अनुसारको वैवाहिक सम्बन्ध साथै परिवाको निर्धारण रहने गर्दछ। ज्योतिषशास्त्रका यी तल दिइएका उल्लिखित राशि हुने युवतीहरू धेरै सफल र राम्रा बुहारी बन्न सक्छन्।